Ụbọchị My Pet » Katz na Nkịta : A bụrụ ndị Guide to Ọzụzụ na Living na Nkịta
emelitere ikpeazụ: Nov. 21 2020 | 9 min agụ
Ọ bụ ajụjụ gaje nkịta nwe kwesịrị ịjụ mbụ, Ikekwe, ihe kasị mkpa na onye ọ bụla ndụ na a nkịta:
Ndị kasị oké egwu mkpebi banyere ndụ anyị na nkịta na-emekarị mere tupu anyị na-eweta otu n'ụlọ. Inweta a nkịta na America bụ disturbingly
mfe. Ị nwere ike trawl online, chọta a breeder, ma ọ bụ na-otu n'ime puppies ụfọdụ eyen na àjà n'èzí ụlọ ahịa (M ga-nye ndụmọdụ ya). Ị
nwere ike na-abịa gafee a kpafuo mgbe si na-eje ije ma ọ bụ na-akwọ ụgbọala. Ụfọdụ na-achọ nkịta maka oké nkume-ike bara uru ihe: nche, ịchụ nta, ọgwụ, search-na-nnapụta. Ma, ọtụtụ n'ime anyị, na-ekwu ọkà n'akparamàgwà mmadụ na behaviorists, nwere ihe mgbagwoju anya nke mmetụta uche na psychological ebumnobi.
N'IHI gịnị ka m chọrọ A nkịta?
Ndị ọzọ nsogbu ụmụ mmadụ na-ejikọta ha na ibe, ihe ha na-echigharịkwuru nkịta (na ndị ọzọ na anu ulo) jupụta ụfọdụ n'ime gaps. O yiri ka anyị kwesịrị ịhụ n'anya na-ahụ ya n'anya na ụzọ ndị gbalụ gbalụ, dị ọcha, na ịdabere.
Contemporary America bụ, ọtụtụ ụzọ, a ezughi ezu, atọghapụ mmadụ. Ikwu anyị ezinụlọ kwagakwara; anyị na-amaghị ndị agbata obi anyị; ọtụtụ n'ime anyị onu elu n'abalị, akasiakde na otu ụdị ihuenyo ma ọ bụ ọzọ. Ịgba alụkwaghịm juru. Ọrụ aghọwo ejighị n'aka, na-ejighị n'aka maka ọtụtụ, mgbe wetara. Ọtụtụ ndị yiri ka ya mfe ibi ndụ na-emekọ na nkịta karịa na ibe, na otú ahụ ka nkekọ dị n'etiti ụmụ mmadụ na nkịta na-eto eto nwayọọ nwayọọ na ike.
Ma nke a mmepe na mmekọrịta nke abụọ a umu bụ otu kwadoro. Ọtụtụ nkịta na-ọma na-eje ozi na ụmụ mmadụ’ anyịnwa ịhụkwu mgbakwunye, ma nkịta ike ime yiri nhọrọ. Ọ bụ ụmụ mmadụ na mkpa na-spawned oké canine ịhụnanya omume.
Ụmụ mmadụ kpebiri na ime ka nkịta n'ime center nke ndụ ha. N'ihi na ihe niile na-fussing banyere anụmanụ ikike, nkịta nwere onye ọ bụla. Ha adịghị na-eme ka n'ji mkpebi. Ha na-dabere na anyị n'ihi na ihe niile ha mkpa iji lanarị. Ha nwere ike ikwu okwu azụ; ha enweghị sịnụ banyere gburugburu ha ma ọ bụ futures.
Ọ bụ ezie na nkịta nyeere aka na-arụ ọrụ na ụmụ mmadụ ruo ọtụtụ puku afọ, ọ bụ naanị na-adịbeghị anya ọtụtụ iri afọ ka ha na-na na-abịa ga-hụrụ dị ka ihe ọzọ karịa (ikekwe ihe karịrị) ụmụ anụmanụ. Pet-Idebe bụ ewu ewu n'etiti ndị bara ọgaranya na ndị dị ike ochie ụfọdụ, ekwu anụmanụ ethicist James Serpell n'akwụkwọ Animals na Human Society: -Agbanwe Agbanwe Perspectives, ma, ọ bụghị nweta nile ùgwù ruo mgbe mbubreyo iri na asaa na narị afọ, a oge nke na-eto eto ịnụ ọkụ n'obi na ndị ọkà mmụta sayensị na eke akụkọ ihe mere eme na ụba nchegbu maka ụmụ anụmanụ’ ọdịmma. Kemgbe ahụ, nkekọ anyị na nkịta Noa budata. Anyị bụ ụmụ mmadụ mgbe kemgbe nso ọzọ umu. Anyị na-eji ọtụtụ iri ijeri dollar na ha na-elekọta, nri, na ntụrụndụ; na-enye ha ụmụ mmadụ aha; agwa ha okwu dị ka ọ bụrụ na ha nwere ike ịghọta anyị; kwere na anyị maara ihe ha na-agwa anyị ka anyị na nloghachi.
Nke a na-mkpali mgbe ekegide nkịta na anyị mkpa anyị na chọrọ. Ọ bụ juru ugbu a, ezie na ọ gaara-awụ akpata oyi ọbụna a n'ọgbọ gara aga, ịnụ ndị na-ekwu na-enweghị mgbaghara ma ọ bụ ihere na ha hụrụ ha nkịta ihe karịa ihe ha n'anya ọtụtụ ndị, na ha na-ahụ ha nkịta dị ka ndị òtù ezinụlọ ha, na ha ịkọrọ ha kasị chie anya nsogbu na nzuzo ha nkịta, ndị na-eguzosi ike n'ihe ndị ọzọ na nghọta karịa ndị nne na nna, na di na nwunye, ndị hụrụ, ma ọ bụ enyi. Itufu oge a ụbọchị ole na ole a pụọ ​​ọrụ dị ka akụkụ nke m nnyocha maka a akwụkwọ, O juru m anya ịnụ otu nwaanyị mgbe ọzọ agụụ, “Lee, Dọkịta, M nwere ike na-ebi ndụ na-enweghị di m, ma na ị nwetara ịzọpụta a na nkịta!” Ma vets ịgwa m ha nụ ya mgbe niile.
Ma ọ bụghị nanị ndị inyom. Behavioral nnyocha na-egosi na ndị inyom n'anya nkịta na akụkụ ha n'ihi na ha iyi n'ụzọ mmetụta uche na-akwado ma mgbagwoju, ike ịghọta ha nwe ke a ukwuu ezie wordless ụzọ. Ka ọ dịgodị, ndị ikom n'anya nkịta ha n'ihi na ha zuru okè pals, obi ụtọ na-aga ebe ndị na-eme ihe, ma na-enweghị ike jide ma ọ bụ ina mkparịta ụka. Dị ka ya ma ọ bụ, anyị nkịta’ upbringings igosi na anyị onwe. Anyị na-emeso anyị nkịta ụzọ anyị na-emeso, ma ọ bụ otú anyị na-achọ na anyị 'd kemgbe. Nke ọ bụla, anyị onwe anyị pasts profoundly mmetụta àgwà anyị banyere nkịta na ụzọ anyị na-azụ ma na-ekwurịta okwu na ha.
Nke a na-abụkarị ihe amaghị ihe ọ bụla usoro. Ole na ole nwe ga-eme ka onwe-mmata ha canine mmekọrịta ma ọ bụ na-atụgharị uche nke na ezinụlọ ha mgbe ha na-eti mkpu, na ha nkịta na-abịa, ma ọ bụ Igba na ha dị ka ma ọ bụrụ na ha ghọtara. Otu ụlọ akwụkwọ nurse m maara jidere ya nkịta site ntị ọ bụla n'abalị mgbe ọ lọtara, eti, “Ị hụrụ m n'anya? M gị ụtọ na mama?” Ọ na-eche ihe mere na nkịta gbalịrị na-agba ọsọ oyi n'oge dị iche iche.
Ya mere, ndị ji na-a nkịta na-mkpa, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya ọdịmma ma na-achọ ezi mmekọrịta. Gị azịza nke mere-a-nkịta ajụjụ na ọ dị mfe na-achọ enyi si a dabere anụmanụ karịa onye? Ị chọrọ a nkịta n'ihi subliminal ozi site na TV ma na fim? Ị na-ọzọ na-adọrọ mmasị na-anapụta e kere eke karịa ọzụzụ na ndụ na ha?
Ị na anyị azụọ na ụzọ anyị ntaramahụhụ., ịrịọ maka etoju nke nrubeisi na izu okè choro nke anyị, akatọ ha na olu na okwu anyị nụrụ? Anyị na-reenacting ochie nke ezinụlọ nkiri, agbalị ịgwọ nmeru aru? Anyị pụrụ ikwu n'eziokwu na anyị ma ọ bụ onye ọzọ na ezinụlọ anyị dị njikere na-obi ọrụ maka nkịta, ọ bụghị nanị na ịhụnanya na ma na-azụ ma na-elekọta ya?
A nwaanyị aha ya bụ Susan gwara m na ọ chọrọ a nkịta n'ihi na o chere nwedịrị ike ịta na a gritty, dara ogbenye obi ke Elizabeth, New Jersey. N'ihi ya, ọ nwetara ihe English mastiff otú buru ibu na ya na-nwe ulo-adịghị anya mere ya na-enye ya pụọ, mgbe ahụ a German ọzụzụ atụrụ aha ya bụ Égbè Eluigwe. Nkịta anaghị irè chebe ụlọ, ichaji n'ihu ọnụ ụzọ mgbe bịara abịa abịa site. Ma ebe ọ bụ na Susan, na-arụ ọrụ dị ka a New Jersey n'ụzọ kondokto, concedes ọ bụ a ogbenye ọzụzụ na obere mmasị na-arụ na nkịta, o nwere igbachi Égbè Eluigwe Re mgbe ndị enyi ma ọ bụ ndị ikwu gaa. Ọ 's na-abịa n'ụlọ ahụ ọtụtụ iberibe shredded mail; nkịta kwere nghọta na-ahụ envelopes abịa n'ọnụ ụzọ oghere dị ka a dị ize ndụ. Ọ 's nwekwara dochie kpụchara akpụcha ibo ụzọ na gbajiri windo.
Site ugbu a, Égbè Eluigwe weighs iri itoolu pound na akwusila Susan nile n'akụkụ ụzọ mgbe ọ na-ewe ya. Ndị agbata obi ha na ụmụ ha na-egwu ya, ezie na ọ na-dịghị mgbe agwọ tara onye ọ bụla ma ọ bụ imerụ. The nkịta adịghị ka ike ike nke ukwuu dị ka akọ na uche; ọ na-eme na ọrụ ọ na-goro ime, a aja nke onwe ya irè. Ma Susan, onye na-ekwu ọ hụrụ n'anya Égbè Eluigwe, concedes na ọ dịghị mgbe ọ chọrọ n'ezie a nkịta ya n'ihi. Ọ na-eleghị anya e kwesịrị a iji chebe onwe N'ezie ma ọ bụ na-akpọ a nchebe-mkpu ụlọ ọrụ kama. “Ọ ga-abụ dị ọnụ ala karịa na n'ikpeazụ, na-adị mfe.”
Ịghọta ihe mere na anyị chọrọ a nkịta dị n'etiti ị na-ahọrọ nri ndị, ịzụ ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị, bi na ha ji obi ụtọ. Ndị ọzọ anyị na-aghọta banyere onwe anyị, mma nhọrọ ndị anyị na ndị o yiri ka ma umu.
Mgbe ị na-eche banyere ya, eleghị anya ị maara ọtụtụ ndị na-eme mkpesa na ha nkịta bụ kwa-arụsi ọrụ ike ma ọ bụ oke sedentary, kwa mmasị na-achụ squirrels ma ọ bụ na-adọpụ bịa mgbe a na-akpọ, kwa-echebe nke ụlọ ma ọ bụ otú nonthreatening ha ga-enyere mepụta oke ọnụ. Ọ bụ ezie na nkịta na-emekarị ọkọkpọhi ụta, dị ka mgbe ọ bụghị onye nwe ya mere ihe na nzukọ ma ọ bụ ọrịa na-atụle nhọrọ. N'ihi ya, nkịta bụ nrụgide na-ihe ọzọ karịa ihe ọ bụ, mgbe ụmụ mmadụ nwere aka ha zuru. Na obere echiche na nnyocha, ndụ nke nkịta na ndị ha nwere ike ịbụ a otutu mfe na ndị ọzọ na-eju afọ. Ma na-eme na-achọ ụfọdụ nghọta nke aka ya akparamaagwa na mmetụta uche, ụfọdụ echiche banyere ebe anyị nọ na ndụ nke anyị na otú anyị nkịta dabara na. Jim, a dinta bụ onye bi nso m ke edere edere New York, na-eme atọ beagles na nnukwu ulo nkita 360 ụbọchị otu afọ. Ha iputa ole na ole ụtụtụ awa na ndị ọzọ ụbọchị ise iji soro egwuregwu. Ha na-etinye a otutu oge na-eche, ma mgbe oge ha na-abịa, ha gbaa nke ulo nkita na n'ọhịa. “Ha bụ ndị oké nkịta,” na-ekwu, Jim, onye na-enweghị ọbụna kpọrọ aha ha.
Ndi enye amasị nwere ha? M jụrụ ya otu ugboro. “Mgbe ha na-eme ọrụ ha m na-eme,” bụ nzaghachi ya. M na-eche reflexively ndo maka nkịta mgbe m ụgbọala site, karịsịa mgbe m na-atụle m nkịta’ pampered ndụ, ma Jim si nkịta, mgbe ha na-na na oké, adịghị ka maara na ha na-efunahụ. Ọ bụghị ihe niile nkịta ike ibi na ụzọ. Ma Jim si beagles egosi na ịtụnanya ime mgbanwe nke nkịta. Ha na-e na ichu nta, oge. Jim nwere a nwunye na ụmụ anọ onye ọ na-ewepụtara, na ọ bụ ọrụ n'aka na ya na-ewu ike; ọ dịghị ya mkpa nkịta-ya omume ntụrụndụ ma ọ bụ ya confidants. Ozugbo a ụbọchị, ọ isi oche gaa ulo nkita na a ịwụ anụ na rifọrọ erifọ na tosses ọdịnaya n'ime ulo nkita. Mgbe Christmas, ọ na-agbakwụnye a ịwụ biscuits. Ha ga-esi ha niile gbaa, ma hụ na a pụọ ​​ma ọ bụrụ na ha na-arịa ọrịa. The beagles mgbe kemgbe n'ime n'ụlọ ya. Ọ na-ekwu nke ha ji nganga na obi ụtọ na-, ma ha na ngwaọrụ, dị ka a dakpuo ma ọ bụ a ọhụrụ égbè, bụghị nta ndị mmadụ, ọbụna n'ezie anu ulo na dịkọrọ ndụ uche. Ma nkịta iyi ọdịnaya na ike. Jim maara kpọmkwem ihe mere ọ chọrọ ka ha. Ha na-aghọta ndị dị mfe iwu na, ebe ọ bụ na nkịta akọ mmadụ mata nke Itie oge, amaghị otú ogologo ha na-aga n'etiti hunts. O nwere ike ịbụ otú ọtụtụ n'ime anyị ga-achọ ka nwere nkịta, ma ya doo anya banyere iche iche nke nkịta ọ chọrọ na ihe mere na o yiri ka na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na onye ọ bụla aka.
Mgbe ahụ e nwere bụ Andrea, onye na-ese ndị na ndụ na a na iri ise-acre ugbo na Vermont. N'ihi na dị iche iche mgbagwoju ihe, ọ na-nyere na echiche nke ndị ikom, alụmdi na nwunye, a ezinụlọ; kama, ọ chọtara a collie nnapụta otu. Ọ na-, kwa, ghọtara kpọmkwem ihe mere ọ chọrọ a nkịta, na nkekọ ọ na-kpụrụ na hers na-egosi na-eme ka ha ma obi ụtọ.
“Enwebeghị m ihe ndabara ọma na mmekọrịta, na ọ dịghị ihe ọzọ ma,” ọ na-ekwu. “Ma ntakwu m na-akpọ isiala nye onye ọ bụla ọzọ. M nwere ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ na ya, ọ na-enye m obi nke ukwuu na ịhụnanya. Ana m atụ anya na ọ 's a akwa ọzọ mmekọrịta, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, Aga m na-na na na.”
Ọ bụghị ka m na-ekwu ma na eziokwu enweghị m ike n'ezie ikpebi ma Andrea mere a maara ihe ma ọ bụ ike oke. Ma o chere banyere ya ebumnobi, banyere otú a nkịta ga-dabara n'ime ndụ ya, na o mere a na-ewere mkpebi.
“N'ihi na m na nwa ewu e na-arịọ maka otu” bụ, n'akụkụ aka nke ọzọ, na-emekarị a na-enyo enyo ihe mere iji nweta a Pita. Ọ bụ a nkịtị ahapụ ime, ma nkịta zụtara dị ka Christmas ịtụnanya maka achọ ụmụ mgbe nwere a ike ike oge nke ya. Nkwa ina mere ma chefuo; mmasị na newcomer ọnụ ọnụ, mgbe ahụ wanes.
Ọ bụghị mgbe niile. A iri na abụọ afọ agbata obi m jụrụ a ọlaedo retriever n'afọ gara aga maka Christmas na ndị mụrụ ya kwetara, na ọnọdụ na Jeremy buru ibu ọrụ nke ya. Ikekwe ha nwere obi ike na ọ ga-n'ihi na Ọ ga-ama owụt ya nkwa udia ya azụ na nhicha si hamster cages.
Na nke ọ bụla omume, Jeremy eme na-elekọta Clancy. Ọ na-ejegharị ya tupu mgbe ụlọ akwụkwọ, na-azụ ya, brushes ya, na-ewe ya na ọzụzụ ọmụmụ ọ bụla Saturday. Kwa ụbọchị mgbe ụlọ akwụkwọ, Jeremy na Clancy zụọ ọnụ. The nkịta mụtara bịa mgbe a na-akpọ, na-anọdụ ala, anọ, na-edina ala na iwu. Ndị mmadụ na-n'ime ime obodo ndị maara na 4-H omume mara otú ike ọ pụrụ ịbụ ka ụmụaka buru ibu ọrụ nke ụmụ anụmanụ. Ndị mmadụ na nwa- na nkịta-crazed ala ịta ahịhịa ebe na-achị mgbe o yiri ka, nta yad, ibu nkịta mara otú pụrụ iche na ọ bụ. N'ihi na Jeremy, na-a nkịta otú iyi ka a mma ihe; ọ nọ na-okwu ya, ma ọ bụ ikekwe nne na nna ya were ọhụrụ nzọụkwụ nke na-esi ọnwụ na ọ na-edebe ya. Nke ọ bụla, M na okosobode ole na ole ụmụaka dị ka ya. Nne na nna, lezie anya: a na a na ezinụlọ nwere na-ibu ọrụ bụ isi n'ihi na a na nkịta, ma ọ bụrụ na ụmụaka na-adịghị, Mama m ma ọ bụ na papa m nwere kwụpụ na.
Ndị nne na nna na-enye ha na ụmụaka ihe ha na-eche na-ezi ha cell igwe, kọmputa, nkịta na-enweghị ọtụtụ echiche banyere otú ihe ndị a ga-eji ma ọ bụ mesoo mgbe azụtara.
Ya mere, gịnị ka ị chọrọ a nkịta?
Ọ bụrụ na azịza, na akụkụ, ị ga a mgbagwoju obi akụkọ ihe mere eme (dị ka na-ahụ na m), jide n'aka na ị na-aghọta na-eche na site nnọọ ihe ọ bụ gị na-arịọ nke a Pita. N'agbanyeghị na anyị àgwà nke anthropomorphizing nkịta, ha adịghị aghọta ihe anyị na-'nd eche na apụghị ịghọta nuances nke mmetụta uche na-arụ ọrụ mgbe ụfọdụ, anyị na-ajụ ha jupụta. Ha pụrụ ọbụna na-akpa àgwà amiably anyị nkọwa ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ụzọ kwesịrị ekwesị họọrọ, gosipụtara, ma zụọ. Ebe ọ bụ na anyị na-atụ anya ndị na-emekarị nnọọ elu, anyị na-adị mfe emechu ihu ma ọ bụ na-ewe iwe. E nwere ihe àmà na-egosi ọkpụrụkpụ na anyị na-na-eke nsogbu nkịta biters, chewers, barkers, neurotics na mkpa nke antidepressants. Nke a na-eme obere n'ihi na ọtụtụ ndị ga-esi na-ezighị ezi nkịta ke ọjọọ ugboro maka na-ezighị ezi. E nwere ihe a omume akụrụngwa na-ewere on a nkịta. Ọ bụ ezie na ha na-adịghị ike nke elu-larịị echiche Filiks, nkịta na-nwere mmetụta uche. Ha na-enweta ihe mgbu na ọnwụ na-, egwu na ịhụnanya. Nke a nyere ha na anụmanụ ndị ọzọ ụfọdụ omume n'etiti ndị nke akọ na uche. O nwere ike ime ka ha Ẹkot ụmụ, ma ọ dịghị amanye anyị ka anyị na-eche banyere otú anyị si emeso ha. Ma nkịta ọ bụla abụghị maka mmadụ nile. Adịghị m anabata na-eto eto, ndọrọ ndọrọ ọchịchị chụpụrụ echiche na nkịta ọ bụla dokwara kwesịrị nnapụta, na ihe nile nkịta nnoo adịcha ha ime mgbanwe anyị egosi, mmadụ jupụtara, litigious mmadụ gburugburu ebe obibi. Adịghị m na-ahụ na na-ezi. Nkịta ferociously idiosyncratic, mgbanwe wildly dabere na ìgwè, Jenetik, -awụba n'oké osimiri ahụmahụ, ọgwụgwọ, na gburugburu ebe obibi. Ụfọdụ bụ ndị genial na jụụ, bred maka temperament, na ụfọdụ ndị ike, bred ma zụọ ichu nta ma ọ bụ ọgụ. Ole na ole n'ime anyị nwere ọzụzụ nkà ma ọ bụ oge ịgbanwe niile nke ndị agwa. The ọjọọ oke nke nkịta nwere ike igosi na a nro maka ị, gị na ezinụlọ gị, na obodo gị; nri onye, a ọṅụ.
Ụfọdụ nkịta mkpa na-arụ ọrụ, ụfọdụ na-eme ọ bụghị; ụfọdụ ga na-ezochiri égbè eluigwe mgbe ndị ọzọ ga-adịghị ọbụna achọpụta ya; ụfọdụ na-akpọ asị ndị na naaa na ndị ọzọ chụrụ anyịnya igwe. Ị nwere ike ọ bụghị mgbe nile mara ihe ndị oddities tupu; ihe ọzọ mere ka ịkpachara anya.